Araka ny lalàna, ity vaomieram-pirenena ity ihany no mahazo mamoaka voka-pifidianana vonjimaika. Mailo hatrany ny CENI Madagascar satria raha manao ny azony atao ireo QG isanisany dia ahiana hiteraka savorovoro amin`ny saim-bahoaka. Maka fotoana amin`ny fahafahana manamarina in-droa hamarinana amin`ny alalan’ireo antontan-taratasy telo samihafa vao mamoaka voka-pifidianana. Miangavy an`ireo kandidà sy ireo mpomba azy mba ho tony, hiandry ny valim-pifidianana havoakan`ity rafi-panjakana misahana ny fifidianana ity amin`ny 20 novambra ho avy izao na mialoha izay, havoakan`ny “tendance” araka izay azo atao. Manantena ny CENI Madagascar fa tia filaminana ny rehetra ary mety hafanam-po ny tamin`ny androm-pififidianana fa mba samy ho tony hiandry izay vokatra eo.